FOTOANA IVAVAHANA IZAO – filazantsaramada
«Aoka hankeo aminao mandrakariva toy ny ditin-kazo manitra ny fivavako, ary ho toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako»(Salamo 141: 2)
Tsy dia mahazatra ahy loatra ilay ana-madinika manitra antsoina hoe « thym » (nogasiana hoe dità ). Raha somary mba nikaroka kely sy nandalina ny momba azy io aho dia voalaza fa anisan’ny tena manana fofona mahery sady mahamanitra sakafo izy io, saingy tsy nisahirana ny hitady azy aho, mba hahazoako marina izay tena fofony sy hanandramana ny tsirony, fa dia nanaiky sy nino fotsiny izay voalazan’ny boky sy ny raki-bolana nokarohiko momba azy.
Rehefa lasa lavidavitra ny fikarohana nataoko tao amin’ny raki-bolana dia voalaza fa mety ho nindramina tamin’ny fototeny Latina sy Grika izay azo adika hoe « fanahy » ny hoe « thym ». Azo heverina fa ilay vavaka miakatra toy ny fofona ditin-kazo manitra, no ao ambadiky izany. Tena tandrify tokoa ny fotoam-bavaka santarintsika amin’izao herinandro fanombohana ny Advento izao izany. Noharin’i Davida tamin’ny fofona ditin-kazo manitra manentoento tokoa ny vavaka nasandrany teo anatrehan’Andriamanitra, rehefa nanandratra ny tanany izy tamin’ny fivavahan-kariva.
Efa nivavaka tamin’ny Tompo ve ianao andro-any? Eny fantatro fa zoma ny andro! Sao dia heverinao kosa ary fa tsy fotoana fivavahana izao satria tsy misy fanompoam-pivavahana nomanina manokana any am-piangonanao any? Moa tsy tokony ho feno vavaka mandrakariva ve ny fiainantsika? Izay rehetra ataontsika sy tenenintsika dia mova tsy toy ny vavaka ataontsika eo anatrehan’Andriamanitra tahaka ireo zava-manitra sy ditin-kazo dorana amin’ny fotoam-pivavahana fanao tao amin’ny Tempoly, ka miakatra sy tonga eo anatrehan’ny seza fiandrianan’ny fahasoavan’Andriamanitra? Fotoana tokony hankalazana sy hivavahana mba hahatongavan’ny Mpanjaka izao!